အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာ - စွဲခြင်းလောသို့မဟုတ်လိင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုလား။ (2019) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: စွဲမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်? (2019)
အတွင်းအခန်း PDF ကိုမှ Link ကို Psychosexual ဆေးပညာမှနိဒါန်း (2019) - ကက်သရင်းအဖြူ MD OBE "အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: စွဲမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ Psychosexual ဆေးပညာမှနိဒါန်း? " (2019)
စာရေးသူရဲ့ ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာ (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၊ လက်တွေ့ဒါရိုက်တာစိန့်မာရီ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုလွှဲပြောင်းမှုစင်တာ၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအတိုင်ပင်ခံ)
ဆေးပညာကျောင်းစာအုပ်မှ Link ကို: Psychosexual ဆေးပညာမှနိဒါန်း: တတိယ Edition ကို, 3rd Edition ကို, Philipa အေ Brough, မာဂရက် Denman
လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာလေ့ကျင့်သူများအတွက်ဤလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်စာသားသည်ယခင်ထုတ်ဝေမှုများတွင်အသုံးဝင်ဆုံးသောဆရာ ၀ န်များဖြစ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံဗဟုသုတနှင့်သက်ဆိုင်သောကုသမှုများအားလုံးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသည့်ထုတ်ဝေမှုအသစ်တစ်ခုသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။ ဘုံပြproblemsနာများ။
အယ်ဒီတာ (s) ကိုဇီဝ
ဒေါက်တာ Philipa တစ်ဦးက Brough တစ် Psychosexual ဆေးပညာ၏အင်စတီကျု၏အဖွဲ့ဝင် (IPM) နှင့် FSRH ၏ Fellow ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရများနှင့် Warrington အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်အတိုင်ပင်ခံသူမသည် Psychosexual ခဲသည်အဘယ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပေါင်းစည်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူမသည်လည်း MFSRH တစ်ခုစစျဆေးသူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့် Psychosexual ဆေးပညာအတွက် RCOG လေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာ Co-စာဖြင့်ရေးသားပေးခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်ဦး IPM နှီးနှောဖလှယ်ပွဲခေါင်းဆောင်, စစျဆေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာမာဂရက် Denman အဆိုပါ IPM တစ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမလည်းမိသားစုစီမံကိန်း, သွေးဆုံးဆေးခန်းများနှင့် latterly တစ်ဦး, ဥပဒေရေးရာစိတ်ရောဂါကုသမှုယူနစ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူအောက်စ်ဖို့ကနေအငြိမ်းစားမိသားစုဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်နှစ်ပေါင်းများစွာ Psychosexual ဆေးပညာအတွက်အကျိုးစီးပွားရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ဆေးရုံနှင့်ရပ်ရွာထဲတွင်နှစ်ဦးစလုံး, settings ကိုအမျိုးမျိုးအတွက်လူနာမမြင်စဖူး။ သူမသည် IPMJ edited နှင့်လက်ရှိတွင် IPM တစ်ခုစစျဆေးနှင့်ဆွေးနွေးပွဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်စိတ်သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှု, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ connection ကိုအသိအမှတျပွု
ညစ်ညမ်းဒီနေ့ရဲ့ပူဇော်သက္ကာ, DVD ကိုအပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်အိမ်လုပ်ရုပ်ရှင်ကားမှလက်ကမ်းစာစောင်များ, စာအုပ်နှင့်မဂ္ဂဇင်းများမှာတွေ့ရှိအစောပိုင်းခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်ကနေကြီးမားတဲ့အသှငျပွောငျးသှားခံခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သောအလွယ်တကူအခမဲ့-streaming များ, high-definition မကြာခဏ Real-time နှင့်အပြန်အလှန်ပစ္စည်းတစ်ခုအဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ ... ဒါဟာ porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်တံခါးများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီညစ်ညမ်းပစ္စည်းတင်ဆက်မှု၏နည်းလမ်းအတွက်အကူးအပြောင်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ယနေ့အမျိုးမျိုး, access ကိုနှင့်အမည်မဖော်လွယ်ကူခြင်းမရှိဘဲ, နည်းနည်းပြဿနာရှိပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ချိုးဆွမကယ်မလွှတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်၎င်း၏အာဏာကို အသုံးပြု. များ၏လှုပ်ရှားမှု '' supernormal လှုံ့ဆော်မှု '' ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်စဉ်းစားနေသည်။ ဦးနှောက်ကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်အတွက်နောက်ဆုံးမှာ receptors နှင့်အချက်ပြနိုင်အောင် ... ပိုကြည့်ရှုသူကိုရှာတတ်၏နှင့်ညစ်ညမ်းမှ masturbates, ပို dopamine ထုတ်လုပ်နေသည်။ ကြည့်ရှုသူနေဆဲလိုသောကျန်ရစ်ပေမယ့်စိတ်ကျေနပ်မှုများ၏အလိုရှိသောအဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့နိုင်ခြင်းနှင့်ဒါ desensitized ဖြစ်လာနေသည်။ ယောက်ျားသည်ဤအယခင်ကယုံကြည်စိတ်ချရသောဆွပေးလိမ့်မယ်လို့ပုံရိပ်တစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အခက်အခဲဆိုလိုပေမည်။ တောင်မှတစ်ခုစိုက်ထူနှင့်အတူသူတို့သုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေးကြောင်းကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးသူတို့ arousal ၏ယခင်အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့ရုန်းကန်အဖြစ်နောက်ဆုံးမှာပျက်ကွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းလိင်ထဲက '' လိင် '' ကြာအဖြစ်ကြည့်ရှုသူလျော့ကျလာသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။
အမျိုးသမီးများ, အမျိုးသားများကဲ့သို့လျှော့ဆန္ဒသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်စိတ်နိုးထလျှော့ချ sensitivity ကိုအတူကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြစေခြင်းငှါ ... အမျိုးသမီးများနေ့ပူးပေါင်းလိင်အဘို့ထက်လိင်စိတ်နိုးထမှုအတွက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးများအတွက် preference ကိုလုပ်အားပေးဖို့ယောက်ျားထက်လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြပြီးဒါအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့် ပတ်သက်. ပုံမှန်မေးမြန်းသည့်အခါ အဆိုပါတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြှနျုပျတို့သညျဤကျေနပ်သည်ဖြစ်စေများကိုတွက်ချက်ရန်ကိုယျ့ကိုယျကိုသတိပေးသင့်တယ် မပါဘဲ ညစ်ညမ်းဆွထက်ဒီဒီတော့ဖြစ်ပါတယ်ယူဆ။
သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုအလွန်အမင်း neuroadaptive အခါတစ်ကြိမ်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုစတင်ကြသူ [သူများသည်] သူတို့မည်သည့်လိင်စိတ်, erectile function ကိုသို့မဟုတ် ejaculate နိုင်စွမ်းပြန်လည်မတိုင်မီသူတို့ abstinence အများအပြားလအတွင်းလိုအပ်ကွောငျးတှေ့နိုငျသညျ။